Madaxweynaha waddanka Ruusha, Vladmir Putin ayaa maanta sheegay in Turkiga aysan weli raallin-gelin ah ka siin diyaaraddii ay maalmo ka hor kasoo rideen, isagoo hoosta ka xariiqay in wax lala yaabo ay tahay in duuliyaheenna dhintay iyo diyaaraddii ay naga soo rideen ay madaxda Turkigu ku doonayaan inay xiriirkii...
Ciidamo kawada tirsan kuwa dawlada federalka soomaaliya ayaa maanta ku dagaalamey gudaha degmada wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose,kuwaasoo geystey khasaare badan oo naf iyo maal ah. Dagaalka ayaa ka bilawdey kadib markii ay qaar askarta kamid ahi damceen in ay ka qaadaan qaar kale oo isbaaro u tiil magaalada dhexdeeda,waxeyna ka...
Dawladda federalka wasaaradeeda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa ugu deeqdey meelaha ay dabeyluhu saameeyeen ee maamulada puntland iyo somaliland lacag dhan hal milion oo dolar. Madaweynaha puntland c/raxmaan shekh maxamu'd faroole ayaa isaguna maanta ka codsadey caalamka iyo hey'adaha samafalka in ay gargaar lasoo gaaraan dadka ay dhibaatadu ku...
Maqaayad ku taal agagaarka baar ubax ayaa lagu weerarey bambada gacanta laga tuuro,iyadoo ay ku dhinteen labo askeri oo ciidamada xogga ah ayna ku dhaawacantey hooyo maqaayada laheyd. Qaraxyada iyo shaqaaqooyinka ayaa beryahan kusoo badanaya muqdisho,lamana oga sababta ka danbeysa waxaase loo badinayaa in dagaalyahanada xarakada alshabaab ay ku baqdin...
Xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed ayaa hambalyo ku aadan ciidda ciidul adxaa u direy guud ahaan caalamka islaamka gaar ahaan kuwa soomaaliyeed meel kasta oo ay ku noolyihiin,gudaha iyo dibadaba. Kusimaha m/weynaha xisbiga midnimada jamhuuriga ahna gudomiye ku xigenka xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed Cali Maxamed Nuux timajilic oo la hadley warbaahinta...
Xarumaha Shidaalka Maamulka Islaamiga Ah Ee ISIS Oo La Duqeeyey
Diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ee duqeynta ka wada dalka Siiriya ayaa sheegay in weeraradii ugu danbeeyey ay la beegsadeen xarumaha shidaalka ee ku jira gacanta kooxda Daacish ama maamulka Islaamiga ah (IS). Duqeynta Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya diyaaradaha dagaalka ee Sucuudiga, Imaaraatiga iyo Jordan. Xarumaha xalay la...
Waxaa Ciidamada Dowladda Kenya ee AMISOM iyo Ururka Al Shabaab uu Dagaal Culus ku dhexmaray Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose. Goobjooge la hadlay Garoowenews Online ayaa sheegay in Dagaalka uu ku bilaawday marka hore Madaafiic kadibna uu isku badalay Weerar ama Dagaal fool ka fool ah waxaana halkaasi...
Ciidamada Dowlada Oo Maanta Dad Shacab Ah Ku Laayey Suqa Bakaaraha, Xilli Ay Eryanayeen Ruux Ku Hubeysna Biskoolad.
Ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida ee Dowladda, ayaa waxa ay laba ruux ku dileen Suuqa Bakaaraha, gaar ahaan Suuqa Hilibka. Sida Wararka looga helaayo Suuqa Bakaaraha ayaa waxay sheegayaan in Ciidamadu, ay arkeyn nin dhalinyaro oo bistoolad ku hubeysan, kaasoo ay durbaba u qaateen inuu ka tirsan Ciidamada Amniyaadka ee Shabaabul Mujaahidiin. Askar Ka Tirsan Ciidamada Dowladda ayaa waxay sare u rideen...